१७ वर्षमै १३६ केजीका भए गणेश, परिवारलाई चिन्ता - Dainik Online Dainik Online
१७ वर्षमै १३६ केजीका भए गणेश, परिवारलाई चिन्ता
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७८, आइतबार ११ : ५७
मोरङ । सामान्यतया १७ वर्षीय नेपाली किशोरको तौल कति हुन्छ ? तपाइँहरूलाई लाग्न सक्छ, ४० केजी या ५० केजी वा त्योभन्दा बढी ? तपाइँहरूलाई पत्याउन गाह्रो पर्ला– मोरङ मिक्लाजुङ—४ का गणेश तामाङको तौल एक सय ३६ केजी छ भनेर सुन्दा ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलबहादुर तामाङका अनुसार गणेश कक्षा– १ मा पढ्दा नै ६० किलोका थिए । जन्मिएको ७ महिना मै गणेशको तौल ३० केजी भइसकेको थियो। गणेशको खानपान र दैनिकी सामान्य छ । घरको सानातिना काममा पनि उनी सघाउँछन् । तर, उनको शरीरले चाहेअनुसार काम गर्न दिँदैन । गणेश भन्छन्, ‘विद्यालय जान र आउन नै गाह्रो लाग्छ ।’
१७ वर्षको उमेरमै उनको तौल एक सय ३६ किलो पुगिसकेको छ । उनको तौल यही हिसाबले बढ्ने हो भने के होला? तामाङ परिवारका लागि अहिले ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।